” မိန်းမပျက်အင်္ဂါ ( ၂၅ ) ပါး “ -
February 3, 2018 - by Saing Pyin Gyi
ဇာတ်ပါဠိတော်တွင် လာရှိသော မိန်းမပျက်အင်္ဂါ(၂၅)ပါး
၈။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် ပြုလုပ်ပေးရမည့်တာဝန်ကို မပြုလုပ်ပေးခြင်း။
၉။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် မပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့အမှုများသာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
၁၁။ လင်ကို ကျောပေးအိပ်ခြင်း။အိပ်ရာခွဲအိပ်တတ်ခြင်း
၁၃။ အသက်ရှု ကြမ်းတမ်းစွာ အိပ်တတ်ခြင်း။ညဥ့်နက်မှအိပ်တတ်ခြင်း
၁၄။ လင်ယောက်ျား စိတ်ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင့်ဘက်လုပ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲအောင် ပြုလုပ်တတ်ခြင်း။
၁၆။ ဖောက်ပြန်သော အကျင့်ကို ကျင့်တတ်ခြင်း။
၁၈။ တခြားယောက်ျားအသံကို နားစွင့်ပြီး နားထောင်တတ်ခြင်း။
၂၅။ အရပ်တကာ လျှောက်သွားတတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
(မဟာကုဏာလဇာတ်၊ ဇာတကပါဠိတော်၊ ဒုတိယအုပ်၊ စာမျက်နှာ(၁၂၁)
အခုခေတ်ကတော့ အွန်လိုင်းသုံးစွဲတတ်သူ မိန်းမပျက်တွေကတော့ (အမျိုးကောင်းသမီးတွေမပါဘူးနော်)
လင်ယောင်္ကျားမသိတဲ့ တစ်ခြားအကောင့်တစ်ခုနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်သူလိုလို
လင်ငယ်လိုလို ထားတတ်ပီး အပြင်မှာချိန်းတွေ့ တတ်ခြင်း၊မိဘဆွေ မျိုများထံ
လင်ယောကျားမှဖောက်ပြန်နေသည်ကိုသိရှိသွားတဲ့အခါ အရှက်ကို ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့်
လင်ကြီးဖြစ်သူ၏ အပြစ်များကို ရှာကြံ၍ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကောင်းပြောပီး မိမိ အပြစ်များကို ကာကွယ်တတ်ခြင်း၊
အိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲအောင် မကြိုးစားတော့ပဲ မိမိ၏ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုသိရှိသွားသောလင်ယောကျား၏ ရန်ရှာခြင်းမှ ကင်းဝေးအောင်
လင်ကြီးအား ကွာရှင်းခွင့်တောင်းခံခြင်း၊ ကွာရှင်းပီးတော့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှာ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်နေတတ်ခြင်း၊။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀တွင် ယောက်ျားမိန်းမနှစ်ဦးတို့ မကွဲကွာအောင် ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲလို့ မေးထားတဲ့မေးခွန်းကို မိန်းမသားဘက်က မိန်းမပျက်အင်္ဂါများမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ပြီး ယောက်ျားသားဘက်ကလည်း မိမိဇနီးမယားကို စောင့်ကြည့်ကာ သတိပေးပြင်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ မိန်းမသားများ ရှောင်ကြဉ်ရမဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ မကြာခင် ယောက်ျားသားများရှောင်ကြဉ်ရမဲ့ အချက်တွေလည်း တင်ပေးပါဦးမယ်။
ဒီအချက်အလက်များကို ရေးသားပေးရခြင်းမှာ မိန်းမများကလည်း မိမိတို့ ဒီအချက်တွေထဲက တော်တော်များများ ဖြစ်နေပြီဆိုရင် မိမိကိုယ်ကို မိန်းမပျက်မဖြစ်အောင် စောင့်ထိန်းနိုင်ဖို့၊ ယောက်ျားများကလည်း မိမိဇနီးမယားဟာ မိန်းမပျက် ဟုတ်မဟုတ်ကို စိစစ်တတ်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိစေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ရေးသားပေးလိုက်တာပါ။
မိန်းမသားများကလည်း မိန်းမပျက်ဘ၀မှ လွတ်ကင်းကြကာ ယောက်ျားသားများလည်း မိန်းမပျက်များနဲ့ ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်….
အဓိကတော့ သူတပြန် ကိုယ်တပြန် မပုတ်ခတ်ကျတော့ အကောင်းဆုံးမြင်တယ်
မိန်းမတွေ မကောင်းဘူးပြောရင် ကိုယ်မိခင် နှမ အမတွေ လဲ ပါသလိုဖြစ်နေတယ်
ယောကျာ်းတွေမကောင်းပြောရင်လဲ ကိုယ့်အဖေ အကို မောင်တွေပါ မှာပဲပေါ့ သူများမကောင်းပြောရင် မိမိလဲ မကောင်းတာနဲ့ ဧကန်မုချ ညားတတ်တယ်နော် မိတ်ေ
ဆွတို့ သူများမကောင်းတာအသာထားကိုယ့်ကိုကိုယ် လူကောင်းဖြစ်ပြီးလားဆိုတာအရင်ပြန်ကြည့်ပါ
” ယောက်ျားဆိုရင် ရှိအပ်သော ဂုဏ် ၆ ပါး ”
” သိကြားမင်းရှီခိုးခြင်းခံရသော ယောက်ျားများ ”
၂ ရတနာ သုံးပါးဆည်းကပ်သူ
၄ တရားအညီ သားမယားတို့ ကို လုပ်ကျွေးသူ
” မိန်မမြတ်အင်္ဂါ၈ ပါး ”
၁ ထမင်းစားပြီးသောအခါ မိခင်ကဲ့သို့ ပြုစုတတ်သောမယား
၂ မိမိလင်အား နှစ်သက်မဖွယ်ရာ အဝတ်အစားတို့ ဖြင့် ဆင်ယင်ပေးတတ်သောမယား
၃ ဘေးအန္တရယ်နဲ့ ကြုံတွေ့ သောအခါ နှမကဲ့သို့ ရှက်ကြောက်ရိုသေတတ်သောမယား
၄ လင်ကိုပကတိအခါ၌ မောင်နှမကဲ့သို့ ရှက်ကြောက်ရိုသေတတ်သောမယား
၅ လှပတင့်တယ် ချစ်စဖွယ် ဖြီးလိမ်းတတ်သောမယား
၆ လင်၏ လိုအင်မှန်သမျှကို သည်းခံနိူင်သောမယား
၇ ကာမဂုဏ်ခံစားမူတွင် လင်၏ကျေနပ်မူကို နှစ်သက်အောင်ပြုစုတတ်သောမယား
၈ ကျွန်ကဲ့သို့ သည်းခံ၍ လင်ကို လုပ်ကျွေးတတ်သောမယား
ထိုမိန်းမကို မြတ်၏ ဟူ၍ ပညာရှိတို့ ကဆိုကုန်၏ အခြားမဲ့၌ လည်း နတ်ပြည်၌ ဖြစ်ရာ၏ ။
” မိနျးမပကျြအင်ျဂါ ( ၂၅ ) ပါး “
ဇာတျပါဠိတျောတှငျ လာရှိသော မိနျးမပကျြအင်ျဂါ(၂၅)ပါး
၁၁။ လငျကို ကြောပေးအိပျခွငျး။အိပျရာခှဲအိပျတတျခွငျး
၁၃။ အသကျရှု ကွမျးတမျးစှာ အိပျတတျခွငျး။ညဉျ့နကျမှအိပျတတျခွငျး
၂၁။ အခြိနျအခါမဲ့တှငျ လငျငယျရှာဖှရေနျ လမျးတကာသို့ ဝငျထှကျသှားလာတတျခွငျး။
၂၅။ အရပျတကာ လြှောကျသှားတတျခွငျးတို့ဖွဈပါတယျ။
(မဟာကုဏာလဇာတျ၊ ဇာတကပါဠိတျော၊ ဒုတိယအုပျ၊ စာမကျြနှာ(၁၂၁)
အခုခတျေကတော့ အှနျလိုငျးသုံးစှဲတတျသူ မိနျးမပကျြတှကေတော့ (အမြိုးကောငျးသမီးတှမေပါဘူးနျော)
လငျယောင်ျကြားမသိတဲ့ တဈခွားအကောငျ့တဈခုနဲ့ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ခဈြသူလိုလို
လငျငယျလိုလို ထားတတျပီး အပွငျမှာခြိနျးတှတေ့တျခွငျး၊မိဘဆှေ မြိုမြားထံ
လငျယောကြားမှဖောကျပွနျနသေညျကိုသိရှိသှားတဲ့အခါ အရှကျကို ကာကှယျသညျ့အနဖွေငျ့
လငျကွီးဖွဈသူ၏ အပွဈမြားကို ရှာကွံ၍ ပတျဝနျးကငျြမှာ မကောငျးပွောပီး မိမိ အပွဈမြားကို ကာကှယျတတျခွငျး၊
အိမျထောငျရေးတညျမွဲအောငျ မကွိုးစားတော့ပဲ မိမိ၏ဖောကျပွနျခွငျးကိုသိရှိသှားသောလငျယောကြား၏ ရနျရှာခွငျးမှ ကငျးဝေးအောငျ
လငျကွီးအား ကှာရှငျးခှငျ့တောငျးခံခွငျး၊ ကှာရှငျးပီးတော့အမြားနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတဈခုခုမှာ သူတျောကောငျးယောငျဆောငျနတေတျခွငျး၊။
ဒီအခကျြအလကျမြားကို ရေးသားပေးရခွငျးမှာ မိနျးမမြားကလညျး မိမိတို့ ဒီအခကျြတှထေဲက တျောတျောမြားမြား ဖွဈနပွေီဆိုရငျ မိမိကိုယျကို မိနျးမပကျြမဖွဈအောငျ စောငျ့ထိနျးနိုငျဖို့၊ ယောကျြားမြားကလညျး မိမိဇနီးမယားဟာ မိနျးမပကျြ ဟုတျမဟုတျကို စိစဈတတျပွီး နှဈဦးနှဈဘကျ အကြိုးရှိစလေိုတဲ့ စတေနာနဲ့ ရေးသားပေးလိုကျတာပါ။
မိနျးမသားမြားကလညျး မိနျးမပကျြဘဝမှ လှတျကငျးကွကာ ယောကျြားသားမြားလညျး မိနျးမပကျြမြားနဲ့ ကငျးရှငျးကွပါစလေို့ ဆန်ဒပွုလကျြ….
အဓိကတော့ သူတပွနျ ကိုယျတပွနျ မပုတျခတျကတြော့ အကောငျးဆုံးမွငျတယျ
မိနျးမတှေ မကောငျးဘူးပွောရငျ ကိုယျမိခငျ နှမ အမတှေ လဲ ပါသလိုဖွဈနတေယျ
ယောကျြားတှမေကောငျးပွောရငျလဲ ကိုယျ့အဖေ အကို မောငျတှပေါ မှာပဲပေါ့ သူမြားမကောငျးပွောရငျ မိမိလဲ မကောငျးတာနဲ့ဧကနျမုခြ ညားတတျတယျနျော မိတျေ
” ယောကျြားဆိုရငျ ရှိအပျသော ဂုဏျ ၆ ပါး ”
” သိကွားမငျးရှီခိုးခွငျးခံရသော ယောကျြားမြား ”
၂ ရတနာ သုံးပါးဆညျးကပျသူ
၄ တရားအညီ သားမယားတို့ကို လုပျကြှေးသူ
” မိနျမမွတျအင်ျဂါ၈ ပါး ”
၁ ထမငျးစားပွီးသောအခါ မိခငျကဲ့သို့ပွုစုတတျသောမယား
၂ မိမိလငျအား နှဈသကျမဖှယျရာ အဝတျအစားတို့ဖွငျ့ ဆငျယငျပေးတတျသောမယား
၃ ဘေးအန်တရယျနဲ့ကွုံတှသေ့ောအခါ နှမကဲ့သို့ရှကျကွောကျရိုသတေတျသောမယား
၄ လငျကိုပကတိအခါ၌ မောငျနှမကဲ့သို့ရှကျကွောကျရိုသတေတျသောမယား
၅ လှပတငျ့တယျ ခဈြစဖှယျ ဖွီးလိမျးတတျသောမယား
၆ လငျ၏ လိုအငျမှနျသမြှကို သညျးခံနိူငျသောမယား
၇ ကာမဂုဏျခံစားမူတှငျ လငျ၏ကနြေပျမူကို နှဈသကျအောငျပွုစုတတျသောမယား
၈ ကြှနျကဲ့သို့သညျးခံ၍ လငျကို လုပျကြှေးတတျသောမယား
ထိုမိနျးမကို မွတျ၏ ဟူ၍ ပညာရှိတို့ကဆိုကုနျ၏ အခွားမဲ့၌ လညျး နတျပွညျ၌ ဖွဈရာ၏ ။
Previous Article မျိုးဆက်ကျန်ဖို့ အိမ်ထောင်တော့ပြုမှာပါလို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ စွမ်းဇာနည်
Next Article Ex ဆိုတာ ဘာလဲ???